Sat, Jun 23, 2018 | 19:34:27 NST
महङ्गो भन्दै उन्नत विउ लगाउँदैनन् किसान
सिरहा, मंसिर २८ – उन्नत जातका गहुँको बिउ महंगो भएपछि सिरहाका झण्डै ९५ प्रतिशत किसानले घरमा उत्पादित गहुँको विउ प्रयोग गर्न थालेका छन् । घरमा उत्पादित बिउको मुल्य एक किलोको २० रुपैयाँ पर्छ भने उन्नत जातका गहुँका विउको भाउ किलोको ५० देखि ६० रुपैयाँ रहेको छ ।
देशभरि चिसो बढ्यो
काठमाडौ, मंसिर २७ – देशका उच्च पहाडी जिल्लामा बुधबार बिहानैदेखि चिसो बढेको छ । मंगलबार रातीदेखि देशका पश्चिमी भागमा पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । मौसमविद् राजेन्द्र श्रेष्ठले पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो बढेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं, मंसिर २६ - अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मंगलवार यो दिवस मनाईंदैछ । जलवायू परिवर्तन र जनसख्या वृद्धिका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनिकरणमा जोड दिँदै हरेक वर्ष डिसेम्बर ११ तारिखमा दिवस मनाईन्छ ।
खाद्यान्नबालीको उत्पादन अवस्था सार्वजनिक गरिँदै
काठमाडौ, मंसिर २५ – सरकारले मुख्य खाद्यान्नबालीको उत्पादन अवस्था सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । धान, मकै, कोदो र फापरको उत्पादन विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यान्त्रिक हलो भित्रिएपछि किसानलाई राहत
दुर्गाप्रसाद शर्मा/उज्यालो । पर्वत, मंसिर २४ - कृषिमा आधुनिक उपकरणहरु भित्रिएसँगै किसानहरुलाई समेत कार्य बोझ घट्न गई राहत हुन थालेको छ । पछिल्लो समयमा गाउँ गाउँमा यान्त्रिक हलो भित्रिएपछि कृषकहरुलाई राहतका साथै गोरु पाल्नुपर्ने झन्झट समेत कम हुँदै जान थालेको छ ।
आश गुरुङ/ उज्यालो । लमजुङ, मंसिर २४ – अलैँची खेतीले प्रख्यात लमजुङको बाँझाखेत गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ५ खाँचे गाउँका वासिन्दा मौरीपालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । गाउँका ३७ घरधुरीले अलैँची खेतीसँगै मौरीपालन सुरु गरेका छन् ।
यसवर्ष सुन्तलाको उत्पादन कम
काठमाडौं, मंसिर २४ – यसवर्ष सुन्तलाको उत्पादन घटेको किसानले बताएका छन् । सुन्तला बढी उत्पादन हुने कास्की, लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, सिन्धुली, रामेछाप लगायतका क्षेत्रमा पोहोरको तुलनामा उत्पादन घटेको हो ।
भारतबाट आयात घटेपछि प्याजको भाउ बढ्यो
काठमाडौं, मंसिर २४ – भारतबाट आयात हुने परिमाण घटेपछि दुई हप्तायता बजारमा प्याजको भाउ उकालो लागेको छ । अरु बेला दैनिक ३० देखि ६० टनको हाराहारीमा आउने प्याज अहिले दैनिक १५/ २० टनमा झरेको छ ।
वातावरण संरक्षणको काम गर्न सिमेन्ट उद्योगलाई अल्टिमेटम
दाङ, मंसिर २३ – घोराही सिमेन्ट उद्योगलाई वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसारको काम गर्न स्थानीयबासील १५ दिनको समयसिमा दिएका छन् । उद्योगको खानी क्षेत्र काभ्रे गाविसबासीले चुनढुङ्गा उत्खनन भएको एक बर्ष बितिसक्दा पनि उद्योगले प्रतिवेदन अनुसारको काम नगरेको भन्दै उद्योगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
पश्चिमाञ्चलमा धान धेरै फल्यो
पोखरा, मंसिर २३ – पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा यो बर्ष धान उत्पादन बढेको छ । पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लामध्ये धान खेती गरिने १४ जिल्लामा यो बर्ष ११ लाख ३२ हजार २ सय १८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको क्षेत्रीय कृष निर्देशनालय पोखराले जानकारी दिएको छ ।
किसानले खाद्य संस्थानलाई धान बेचेनन्
नेपालगञ्ज, मङ्सिर २२ – नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय भेरीले धानको मूल्य कम दिएको भन्दै किसानले नीजि व्यवसायीलाई धान विक्री गरेका छन् । संस्थानले भन्दा बढी मुल्य दिएपछि बाँकेका किसानले नीजि व्यवसायीलाई धान बेचेका हुन् ।
गहुँबालीका लागि ७८ हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल आयात
काठमाडौं, मंसिर २१ – सरकारले गहुँबालीका लागि भनेर ७८ हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल आयात गरेको जनाएको छ । गहुँबालीका लागि चाहिने १ लाख ३० हजार मध्ये ७८ हजार टन मल आयात गरिसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।
सुन्तला उत्पादन १७ प्रतिशतले बढ्यो
दमन राई/ उज्यालो । खोटाङ, मंसिर २१ – खोटाङमा यस वर्ष १७ प्रतिशतले सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । औंशा किराको कम प्रकोप, हावाहुरी तथा असिनाको कम प्रभाव, कृषकहरुको उचित बगैंचा व्यवस्थापन लगायतका कारण जिल्लामा यस वर्ष १७ प्रतिशतले सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको हो ।
दलहन र तेलहनको उत्पादन बढाउन अभियान
नेपालगञ्ज, मंसिर २० – दलहन र तेलहनको उत्पादन बढाउन बाँकेमा अभियानमूखि कृषि कार्यक्रम लागु भएको छ । बिउ उत्पादनका लागि कृषक समूह तथा सहकारीलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर अभियानमूखि कार्यक्रम सुरु भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक सशिन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
दूधको उपभोक्ता मूल्य मात्र बढाइएकोमा किसानको आपत्ति
काठमाडौं, मंसिर १७ – दूधको उपभोक्ता मूल्य मात्र बढाइएकोमा किसानले आपत्ति जनाएका छन् । अहिले पनि लागत अनुसारको मूल्य नपाएको भन्दै उनीहरुले किसानको मूल्य पनि बढाउन माग गरेका छन् ।
जुम्लामा कति जाडो ! विहानदेखि हिमपात
जुम्ला, मंसिर १५ – जुम्लामा शुक्रबार बिहानदेखि हिमपात भएको छ । जुम्ला सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा बिहानदेखि हिमपात भएको हो । सदरमुकाम र आसपासका डाँडा सेताम्मे भएका छन् । बिहान जुम्लाको तापक्रम माइसन १० डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको थियो ।
हिउँदे वालीलाई रासायनिक मल अभाव हुदैन
काठमाडौ, मंसिर १४ – धान रोप्ने समयमा मल नपाएर सास्ती भोगेका किसानले हिउँदे वालीका लागि अहिले नै मल खरिद गर्न थालेका छन् । गहुँ र तोरी खेती लगाउने बेला भएकाले किसानले समयमै मल सञ्चित गर्न थालेका हुन् ।
पहिचान नखुलेको रोगबाट ५० भन्दा बढी बाख्रा मरे
इलाम, मंसिर १३ – पहिचान नखुलेको रोगका कारण इलामको जमुनामा ५० भन्दा बढी बाख्रा मरेका छन् । पिपिआर रोगको जस्तै लक्षण देखिने रोगका कारण जमुनाका किसानका बाख्रा मरेको स्थानीय शिक्षक तुलसा गुरूङले जानकारी दिनुभयो ।
धान उत्पादन १० प्रतिशतले घट्यो
भवानी भट्ट/ उज्यालो । महेन्द्रनगर, मंसिर १३ – खडेरी तथा बाढीका कारण कञ्चनपुरमा धान उत्पादन १० प्रतिशतले घटेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ३ दशमलव १ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर धानको उत्पादकत्व रहेपनि यस वर्ष २ दशमलव ७ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर धान उत्पादन भएको छ ।
गाई भैंसीको कृत्रिम गर्भाधानमा पर्वतका किसानको आकर्षण
दुर्गाप्रसाद शर्मा/उज्यालो । पर्वत, मंसिर १३ - पछिल्ला केहि वर्ष यता पर्वतमा गाई भैसीमा कृत्रिम गर्भाधानप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । गाउँघरमा व्याडका रुपमा साँढे र राँगा पाल्न छाडेपछि कृत्रिम गर्भाधान गर्नेको संख्या बढ्दै गएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कृत्रिम गर्भाधान गर्नेको संख्या १० प्रशितशतले बृद्धि भएको छ ।
६ लेन सडकको वीचमा बगैंचा बनाइने
रमेश गिरी/उज्यालो भक्तपुर, मंसिर १३ – कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म ६ लेन सडकको मध्यभागमा बगैंचा बनाउन वृक्षारोपण शुरु गरिएको छ । वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले बुधबारदेखि शुरु गरेको वृक्षारोपणको एक कार्यक्रमकावीच प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उद्घाटन गर्नुभयो । उहाँले बृक्षारोपणको कामलाई देशभर अभियानका रुपमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालका खानीको अध्ययन गर्न काठमाडौमा गोष्ठी शुरु
काठमाडौ, मंसिर १३ – नेपालको खानी र भौगर्भिक अवस्थाका बारेमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न हिमालय–काराकोरम–तिव्बतको गोष्ठी बुधबारदेखि काठमाडौमा शुरु भएको छ । नेपाल भौगर्भिक समाज र खानी तथा भूगर्भ विभागको आयोजनामा शुरु भएको गोष्ठीको राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उद्घाटन गर्नुभयो ।
काठमाडौलाई हरियाली बनाउन वृक्षारोपण शुरु
काठमाडौ, मंसिर १३ – सरकारले काठमाडौ उपत्यकाकालाई सफा र हरियाली राख्न बुधबारदेखि वृक्षारोपण अभियान सुरु गर्दैछ । पहिलो दिन काठमाडौको कोटेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म एक हजार ५ सय रुखका विरुवा रोप्न शुरु गरिनेछ ।
विनोद चौलागाईं/उज्यालो । काठमाडौं, मंसिर १२ - नेपालमा १० बर्षजति भयो गाई पालन व्यवसायिक रुपमा फष्टाउन थालेको । निर्वाहका लागि पालिने गाईलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेपछि अहिले युवाहरु पनि आकर्षित हुन थालेका छन् । तर गाई पालन गर्नुअघि आहारा, स्वास्थ्य तथा गोठ व्यबस्थापनका बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नजानीकन लाग्दा फस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
बाग्मती नदीलाई प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने
काठमाडौ, मंसिर १२ – काठमाडौ उपत्यकाका नदीनालालाई सफा राख्न प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ । अहिले बाग्मती नदीलाई प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी छ । काठमाडौ महानगरपालिका र स्थानीय सरोकारवाला समितिसंग सहकार्य गरेर पहिले सुन्दरीजलदेखि गुहेश्वरीसम्म प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भएको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष महेश बस्नेतले बताउनुभयो ।
विश्वकै पिरो खुर्सानीको बेर्ना छिट्टै किसानले पाउने
काठमाडौ, मंसिर ११ – बिश्वकै सबैभन्दा पिरो खुर्सानीमा पर्ने भोट जलोकियाको बेर्ना उत्पादनको तयारी भएको छ । केन्द्रीय तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्रले फागुनमा बेर्ना उत्पादन गरेर यसलाई किसान माझ लैजाने तयारी गरेको हो ।
कफीमा रमाउँदै अर्घाखाँचीका किसानहरु
प्रेमनारायण आचार्य/उज्यालो अर्घाखॉची, मंसिर ९ – थोरै मेहनत र लगानीमा राम्रो आम्दानी लिन सक्ने भएपछि अर्घाखॉचीका किसानहरु कफी खेतीमा सक्रिय भएका छन् । ४ वर्षअघिदेखि अर्घाखॉचीको कफी अमेरिका, जापान र कोरियामा समेत निर्यात हुन थालेपछि किसानहरु गाउ‘गाउ‘मा कफी उत्पादन समूह बनाएर खेतीमा सक्रिय भएका हुन् ।
सरकारले पाँचै विकास क्षेत्रमा मौरी विकास शाखा विस्तार गर्ने
काठमाडौं, मंसिर ८ – सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षदेखि पाँचै विकास क्षेत्रमा मौरी विकास शाखा विस्तार गर्ने भएको छ । काठमाडौं र चितवनमा मात्रै रहेको मौरी विकास शाखालाई आगामी आर्थिक बर्षदेखि पाँचै विकास क्षेत्रमा विस्तार गर्ने कृषि विभागका महानिर्देशक खेम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
इलाममा १८ करोड रुपैयाँको चीज र घिउ बिक्री
इलाम, मंसिर ८ – इलाममा सञ्चालित साना/ ठूला चीज कारखानाबाट झण्डै १८ करोड रुपैयाँ बराबरको चीज र घिउ उत्पादन तथा बिक्री भएको छ । आफ्ना उत्पादनको बिक्रीबाट चीज र घिउ कारखानाले एक बर्षमा १७ करोड ४२ लाख ६८ हजार सात सय ९० रूपैयाँ रकम भित्र्याउन सफल भएका छन् ।
कृषि ब्यवसायिकरणका लागि ऐन बनाउने तयारी
काठमाडौ, मंसिर ८ – कृषि व्यवसायिकरणका लागि ऐन बनाउने तयारी भएको छ । सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त पहलमा मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही महिनाभित्र मस्यौदा पेश गर्ने तयारी भएको महासंघ अन्तर्गत कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख प्रदीप महर्जनले बताउनुभयो ।
खोटाङमा अलैची २५ प्रतिशत घट्ने
दमन राई/उज्यालो । खोटाङ मंसिर ८ – खडेरीका कारण यसवर्ष खोटाङमा अलैंची उत्पादन घट्ने भएको छ । सिजनमा पानी नपरेका कारण यसवर्ष जिल्लामा २५ प्रतिशतसम्म अलैंची उत्पादन कम हुने अलैंची कृषक संघ खोटाङका अध्यक्ष बीरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । गएको वर्ष जिल्लामा ६ सय मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन भएकोमा यस वर्ष ४ सय मेट्रिक टन मात्र अलैंची उत्पादन हुने सम्भावना रहेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ । बाह्रै महिना पानीको चाहिने अलैंचीका लागि आवश्यक पानी नपर्दा उत्पादन कमी हुने कृषि कार्यालयका प्राबिधिक सह...
समर्थन मूल्य नतोक्दा धान किनबेचमा ढिलाई
नेपालगन्ज, मंसिर ७ – सरकारले धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा जिल्लामा धानको किनबेचमा ढिलाई भएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले छठपछि धान खरिद गर्ने योजना बनाएपनि सरकारले मूल्य नतोकेपछि खरिद गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय पशुपालन नीति ल्याउने सरकारको तयारी
ललितपुर, मंसिर ७ – भेटेरिनरी प्राविधिकको अभावका काराण व्यवसायिक पशुपालनको विकास हुन नसकेको पशु विज्ञहरुले बताएका छन् । पशुपंक्षीको विकास र पशुजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउनका लागि भेटेरिनरी प्राविधिकको संख्या बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
विज्ञको सुझाव : जतिसक्दो छिटो गहुँ छरौं
विनोद चौलागाई/उज्यालो काठमाडौ, मंसिर ६ – खेतमा धान काटेपछि जतिसक्दो छिटो गहुँ छर्न किसानलाई कृषि विज्ञले सुझाव दिएका छन् । यस वर्ष बर्षात कम भएकाले खेतमा चिस्यान हुँदैमा गहुँ लगाउँदा राम्रो हुने गहुँ प्रजनन विज्ञ डा. ध्रुव थापाले बताउनुभयो ।
पूर्ण बजेट नआउँदा कृषि योजना प्रभावित
काठमाडौं, मंसिर ६ – सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्दा कृषि परियोजना प्रभावित हुने भएका छन् । खाद्य सुरक्षा, किसानका लागि बीउ बिजन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलका खेती विस्तार लगायत ठूला साना झण्डै एक दर्जन परियोजना प्रभावित हुने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मौरीलाई आधुनिक घारमा सारे बढ्छ महको उत्पादन
काठमाडौं, मंसिर ६ – मौरीलाई परम्परागत घारबाट आधुनिक घारमा सारेमा मह उत्पादन बढ्ने मौरी विज्ञहरुले बताएका छन् । किसानको आर्य आर्जन बढाउनका लागि पनि आधुनिक घारको विस्तारमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
सरसफाइमा भएन प्रगति
काठमाडौ, मंसिर ५ – सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सबैलाई खानेपानी र सरसफाइको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएपनि सरसफाइको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । अझै पनि खानेपानी र दिगो सरसफाइको पहुँच नहुँदा हरेक वर्ष झण्डै १० हजार वालवालिकाले ज्यान गुमाउने गरको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
काठमाडौमा ६५ हजार जनालाई एउटा चर्पी
काठमाडौ, मंसिर ४ – सार्वजनिक शौचालयको सरसफाइमा जोड दिँदै सोमबार विश्व चर्पी दिवस मनाईंदैछ । ‘लैंङ्गिकमैत्री सार्वजनिक शौचालयमा लगानी गरौ, सन् २०१७ सम्ममा सबैका लागि सरसफाई पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सघाऔँ’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन् ।
खाद्य संस्थानले धानको मुल्य तोक्यो
नेपालगञ्ज, मंसिर ३ – नेपाल खाद्य संस्थानले छठपछि कृषकको घरदैलोमै पुगेर धान खरिद गर्ने योजना अनुसार धानको मुल्य निर्धारण गरेको छ । संस्थानले मोटा धान प्रतिक्विन्टल एक हजार ६ सय ७५, मध्यम एक हजार ८ सय ५ र मसिनो दुइ हजार पाँच रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मुल्य निर्धारण गरेको नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय भेरीका प्रमूख शंकर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
कफीको उत्पादन बढाउन खेती विस्तारको तयारी
काठमाडौं, मंसिर ३ – स्वदेशी कफीको माग बढेपछि यसको उत्पादन बढाउन खेती विस्तारको तयारी भईरहेको छ । अहिले माग अनुसारको कफी उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादन नबढेपछि कफीको खेती विस्तारका लागि योजना बनाइएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ ।